Free Download GarageBand u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Apple GarageBand u Mac
Apple GarageBand u Mac
Si lagaaga caawiyo in aad si fiican uga dhawaajiyeen oo la abuuro songs, GarageBand 11 ka dhigaysa Mac diiwaangelinta studio dhamaystiran. Dhawaan kasoo muuqday awooddiisa Time oo jeexdin aaddinta, waa wuxuu diyaariyaa qaladaad wakhtiga oo kuu ogolaanaya in alaabta wax badan muuqan wada ciyaaray. Sidoo kale waxaa ka mid ah casharada cusub oo dheeraad ah, waxaad samayn kartaa horumar weyn oo ku saabsan qalab ciyaareed. Sidaas oo ay tahayna, Mac ah Intel ku salaysan la processor dual-asaasiga ah ama ka fiican iyo interface ah Mac OS X-socon audio la taageero 24-yara audio waxaa looga baahan yahay inay qaab ciyaareed fiican. Garage Band Artist Casharada yihiin si gooni gooni ah u iibin jireen. Waxaad iyaga ku iibsan kartaa iyada oo dukaanka cashar GarageBand in dalal la xushay.
Istuudiye lagu duubo heesaha customizable
GarageBand ka mid ah 22 cusub "Baro Play" casharada ee qaybaha muusikada ugu caansan. The feature cusub "Sidee baan Play?" saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku dhaqmaan leh cashar kasta oo halka helo jawaab-celin-waqtiga dhabta ah farta ku fiiqaya qaladaadkaaga iyo raad aad aqoonta waqti fara badan. Iyada oo awooddiisa Time Si dhakhso ah, aad u hagaajin kartaa qaar ka mid ah khaladaad saacado shil ah, bedesho waqtiga duubista, ama sameeyo qaar ka mid ah isbedelada hal abuur leh qaab cusub.
Utility Audio xirfadeed fudud isticmaalka
Iyada oo kaliya click hal, aaddinta jeexdin waafajiyo kartaa laxanka iyo wakhtiyada raadkaagu oo dhan. Isla mar ahaantaa, waxay u lafaguraa ay laxanka iyo kulan kuwan raadkaygay kale isla. In this version cusub, waxaa qoreysa amps gitaarka dheeraad ah iyo saamaynta stompbox, oo toddoba amps gitaarka cusub oo 12 ka dib markii lagu saleeyey dugsiyada marsho ugu baqi jireen oo dunida ku kala duwan yihiin codadka nadiif ah dhalanrog culus iyo shan saamaynta stompbox cusub. Iyadoo 22 aasaasiga ah Casharada cusub ee gitaar iyo biyaano, ciyaartoyda heli kartaa hage xirfadeed ka screen miidhan, Apple macallin is-dhexgal alaabtii dhaceen dhisay-in. Utility Tani waxay balan aad ka ciyaari kara song hit baray artist asalka ah.
Sidee baan Play?
Habkaani wuxuu ku dhisay-in ka mid ah "Sidee baan Play" waxay noqon doontaa ugu cadcad ee ugu horeysay ee. Its cashar Store kuu ogolaanayaa inaad dhirtuba, dooro, iibsashada iyo kala soo bixi Casharada Artist aad rabto. Inta aad ku ciyaaraan oo ay la socdaan utility, waxa raad doonaa shaqada waqti ka, iyo soo dirto-celin ku saabsan meesha aad ku sameeyey qaladaad. The bar Horumarka bixin doono guud ee ciyaarta, taas oo muujinaysa sida ay si cad u si sax ah inaad ka. Muujinta ah ee gaadhay Tababaraha caawin karaan in aad baratid sida loo ciyaaro ee chords ugu badan, diraya-celin-waqtiga dhabta ah.